Filoha Duterte: Raha tsy te hanao vaksiny ianao dia mandehana any am-ponja na miala amin'i Filipina!
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany mikasika ny Filipina » Filoha Duterte: Raha tsy te hanao vaksiny ianao dia mandehana any am-ponja na miala amin'i Filipina!
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • People • Vaovao farany mikasika ny Filipina • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Raha tsy te hanao vaksiny ianao, dia hosamboriko ary hampidirako vaksiny ao amin'ny vodinao.
Filipina dia mety manomboka migadra ireo olona tsy mety mahazo jab COVID-19.
Niasa tamin'ny tompon'andraikitra amin'ny governemanta i Duterte mba hamantatra ireo izay tsy mety tratran'ny bala.
Nanery ny renivohitry ny firenena, Manila, ny mpifidy ambany, hanala ny politikan'ny vaksiny 'tsy mandeha an-tongotra' ny alatsinainy teo.
Ny filoham-pirenena Filipina Rodrigo Duterte dia nanala ny fahasosorany noho ny fisalasalana momba ny vaksininy nandritra ny filankevitry ny minisitra ny alatsinainy alina teo, nanambarany fa mety hanomboka migadra ireo olona tsy mety mahazo jab COVID-19 izy.
“Raha tsy te hanao vaksiny ianao dia avelao ny Filipina, ”Tezitra i Duterte noho ny tahan'ny vaksiny ambany ao amin'ny firenena.
“Mandehana any India raha tianao, na any Amerika. Fa raha mbola eto ianao ary olombelona ary afaka mitondra ny viriosy dia tokony hatao vaksiny ianao. ”
Niasa tamin'ny tompon'andraikitra amin'ny governemanta i Duterte mba hamantatra ireo izay tsy mety tratran'ny bala. "Hasaiko ny fisamborana azy ireo, raha ny marina," hoy izy. “Misafidiana - manao vaksiny na migadra?”
I Duterte, izay fantatra amin'ny fampiasana fiteny mahitsy sy crass imasom-bahoaka, dia voatonona nilaza hoe: "Raha tsy te hanao vaksiny ianao, dia hosamboriko ary hampidirako vaksininy amin'ny vodinao."
Nanery ny renivohitry ny firenena, Manila, ny mpifidy ambany, hanala ny politikan'ny vaksiny 'tsy mandeha an-tongotra' ny alatsinainy teo. Nanasa olona 28,000 ho any amin'ny tranokala fanaovana vaksinina ny manampahefana ao Manila tamin'ny alàlan'ny hafatra an-tsoratra, fa 4,402 ihany no tonga. Nilaza ny ben'ny tanàna Isko Moreno fa hiverina amin'ny fomba varavarana misokatra am-boalohany ny tanàna, amin'izay misy olona afaka miseho ho voatifitra.
Filoham-panjakana misahana ny fahasalamana any Filipina Maria Rosario Vergeire dia nilaza fa nomena toromarika ny tompon'andraikitra isam-paritra sy eo an-toerana mba hanamafisana ny fifehezana ny sisin-tany manohitra ny Vinan'ny Delta, izay fantatra amin'ny anarana hoe karazana indiana ary azo ampitaina kokoa noho ny soritr'aretin'ny coronavirus.
Ny mpiasan'ny fahasalamana tany Filipina dia nandrakitra tranga vaovao 5,249 ary maty 128 omaly. Amin'ny ankapobeny, maherin'ny 1.36 tapitrisa no voan'ny coronavirus, ary 23,749 no maty.
Hatramin'ny sabotsy dia 2,210,134 111 XNUMX ny Filipiana amin'ny XNUMX tapitrisa no vita vaksiny feno.